CIA oo Samaysay Ashahaado-la-dirirkii Labaad – Ahlu Sun Wal “Jalaafo” iyo Jagada Ra’iisulwasaaraha oo loo Wado! | Halganka Online
CIA oo Samaysay Ashahaado-la-dirirkii Labaad – Ahlu Sun Wal “Jalaafo” iyo Jagada Ra’iisulwasaaraha oo loo Wado!
Posted on Maarso 3, 2010 by halganka
Ilaah baa mahad leh. Nabadgelyo iyo naxriis nabi Muxamed korkiisa ha ahaato.
Mar niman sagaal ah oo dagaal ooge Qanyare shirguddoominayey Dayniile shir ku qabteen 2006-dii bay soo saareen magacaan Ingiriis ahaan noqonaya Alliance for the Restoration of Peace and Counter-terrorism (ARPCT). Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa: Isbaheysigii Nabad-soo-celinta iyo la-dagaalanka Argagixisada! Ma filayo in nin ka mid ah magacaas bixin karo.
Waxaa la aaminsanyahay inay magaca samaysay CIA-du. La iskuma hayo in CIA dhaqaalaha ku bixisay oo taageertay ee kaliya waxaan ka hadlayaa magac-bixinta.
Markiiba nimankaas waxaan ku mitaalay sagaalkii nin ee nabi Saalax mu’aamarada ku sameeyey. Ikastoo la yiri: tuug intaadan tuug ku oran buu adiga tuug kugu dhahaa! Nasiib wanaag shacabkii Soomaaliyeed waxay u baxsheen Ashahaado-la-dirir. Bilo gudahood baa meelahay joogeen ay la wareegeen Midowgii Maxkamadaha – waa nimankii CIA rabtay in la tirtiro. Haddeerna waxaan rajaynayaa in nimankaas wadaadada sheeganayey ee maalmo ka hor Addis Ababa taagnaa inay mari doonaan waddadii dagaaloogayaasha. In kastoo safaaradda Maraykanku Galaal u dirtay inuu wax la qabto haddana ma aha markii ugu horreysay ee Galaal tago Safaaradda Maraykanka.
Bilo ama asbuucyo ka hor markii Qanyare iyo saaxiibbadiis ku shirayeen Dayniile waxaa safaarada Maraykanka ee Kenya tagay Indocadde iyo Galaal iyo niman kale. Markuu Indhocadde ku noqday Xamar wuxuu dhinaca saaray Maxkamadaha. Ma lagu darsaday Maxkamadaha mise waa iska dhacday? Indhacaddaa ka jawaabi kara arritnaas laakiin biiritaankiisa ay isaga Shariif Amisom ku biireen waxay tusaysaa wax u qarsoonaa.
Qolyahan Suufiyadu waa ka liitaan dagaaloogayaasha maxaa yeelay dagaaloogayaashu waxay ahaayeen qaaqlayaal mooryaan ah oo la yaqaannay laakiin nimanka Suufiyadu waxay metelaan dad badan oo Soomaaliyeed. Marka haddaan shacabka Soomaaliyeed ka bari noqon nimankaas waxay ku sifoobooyaan gaaloraacnimo.
CIA waxaa ka yaabiyey sida qolyo sheegtay Hay’adda Culumada Soomaaliyeed u taageereen Shariifka! Inkastoo taageerada CIA iyo hay’addaasi taageereen Shariifka wax u tariweyday “dowladda” Shariifka haddana CIA-du ma rabto inay Shariifka cayriso maaddaama aysan heyn qof kale ooy ku beddelato oo shaqo fiican u qaban kara. Waxay doorbidday in Shariifka iyo Ahlu Sun Wal “Jalaafo” la isu keeno. CIA-da waxaa ka sii yaabiyey niman Al-Ictisaam sheeganaya oo qaarna dhaho: Shariifka hala taageero; qaarna: yaan Shabaab iyo Amisomba la isagu tegin!
Abu Namiic baa kitaabkiisa Xulyah ku sheegay in labo nooc oo dadka ka mid ah hadday wanaagsanaadaanna ay dadku wanaagsanaadaan; hadday labadaas koox xumaadaanna, dadku xumaado. Labada koox waa madaxda iyo culumada. Xaddiiska wixii la rabo halaga sheego ruwaaddiisa laakiin micno ahaanta waa wax waaqici ah oon la inkiri karin. Hadda madax ma lihin ee fiiri madaxda muslimiinta horbooda. See yihiin? Dadkuse see yahay?
Hadda culumaan leennahay. Marka kuwo yar oo Ilaahay u naxariistay maahee inta kale xaalkooda waa la saari la’ yahay! Maxaa saas ugu hadlay? Dhibka ay Islaamka iyo Soomaali ku hayaan. Hay’ad Sheegatay Culumada Soomaaliyeed ayaa Shariifka ka yiri: waa dowlad Islaam ah! Ilaahay dowlad Islaami ah idin ma tuso! Waan u dignay oo la yiri: war Ilaahay ka baqa oo waxa CIA iyo gaaladu soo dhistay, Islaam haku sheegina! Ilaah wuxuu qaddaray wasiirka Dastuurka ee Amisom, Madoobe Nuunoow, inuu isagoo Jabuuti jooga haddeer leeyahay: waxay ku gudojiraan diyaarinta dastuurka cusub ee federaalka! Wuxuu sii sheegay in guddi wasiirro ah loo xilsaaray talo-bixin. Waxaa intaas dheer inuu qaadasha dastuurka ku xiran ahay Shacabka Soomaaliyeed! Yaa garanaya kalmad ka gaalnimo badan taas? Labo khalad oo waaweyn buu galay:
1- Inuu isagu diyaarinayo dastuur dowlad Islaami ah. Iskeed bay gaalnimo u tahay!
2- Inuu yiri marka la diyaarsho waxaa la weydiinayaa shacabka! Waa gaalnimo kale!
Horaan u sheegay in Shabaabku ka saxsan yihiin wadaadadaas. Wadaadaas hay’adda isku sheegayey waa igala caqli xun yihiin wasiirka! Wasiirku waa zindiiq Ashahaado-la-dirir ah oo gaalo soo dhistay ee maxaan “culumada” ka dhahnaa? Sida Abuu Naciim sheegay waxaan leeyahay Soomaaliya waxaa qaribaya labo kooxood:
B- Mujrimiin madaxtinimo sheeganeysa.
T- Murji’o muftiyo sheeganeysa!
Hadda CIA waxaad mooddaa inay leeyihiin Shariifka hadda lama tuuri karo ee waa in kan Ina C/Rashiid ah ee meesha iska taagan la tuuro dabadeedna Ahlu Sun Wal “Jalaafo” la siiyo ra’iisul wasaaraha si ay dagaalka ugu sii jiraan oo iyaga iyo Shariifku shuraako noqdaan. Hadda waad aragtaan in la leeyahay nimankii hoteellada ku xareysnaa ee “xildhibaannada” ahaa baa mooshin ka dhan ah Ina C/Rashiid u gudbiyey Aadan-madoobe.
Ahlu Sun iyagoo intaas oo dambi ku jira baa hadda is-qabqabsigoodu soo shaacbaxay kaddib shirkii Addis Ababa loogu yeeray iyaga iyo Shariifka. Mar horaba kuwa ka soo carooday baa Xamar yimid. Bal xaggee Galaal, Dabogeed, iyo Aadan Garaase ka soo galayaan Ahlu Sun? Teeda kale qaar qabiillada ka mid ah waa arkeen filimka waxayna u dhowdahay inay iskaga baxaan.
Waxaan shacabka u sheegayaa in wixii Suufinimo sheeganayey ay bari ka noqdaan nimankaas Zenawi iyo dagaaloogayaasha ku darmay. Dhallinyarada waxaan u sheegayaa nimankii Soomaaliyeed ee Salafka sheegta marka laga reebo inta Jihaad ogol, waa ka liitaan Ahlu Sun! Sabab? Haddee Ahlu Sun mabda’ooda khaldan bey ku dagaalayaan laakiin niman muftiyo sheeganaya baa Shariifkaas, halkaas yaal oo leh dastuur cusub buu soo wadaa iyagoo weliba shacabka weydiinaya afti, laga kari la’ yahay inaysan ugu yeerin amiir! Markhaati Ilaahay waxaan ka ahay in kuwaas culumada sheeganaya dulloobeen. Dadkiina waa arkay fadwooyinkey bixiyeen.
Mar kale CIA iyo Zenawi waa mahadsanyihiin maaddaama wixii dhiig lahaa arkeen in Shariif iyo Ahlu Sun gaaloraaceen. Culumada wax u rabta Shariif waa niman gaalo-raacyo-raaceen ah! Gaaloraacyo bay sii raaceen! Marka bilo gudahood sidii Ashahaado-la-diririkii sheegtay inay nabad soo celinayaan loola dagaalay ayaa kuwaan magacyada fiican la baxayna hal meel Shacabkoo dhan oo Mujaahidiintu horboodayaan looga soo jeesan doonaa haddii Ilaah idmo. Guusha Ilaah baa baxsha ee gaalo ma bixiso.
INNAA IDAA NAZALNAA BI SAAXATI QOWMIN FASAA’A SAXAABUL MUNDARIIN
WA SALLALLAAHU CALAA NABIYINAA MUXAMADIN WA CALAA AALIHI WA SAXBIHI WA SALAM
SUBXAANAKALLAAHU MA WA BIXAMDIKA ASTAQFIRUKA WA ATUUBU ILEYK
« Faroole oo xilalkii ka eryey saraakiil muhiim ahaa ka dib markii qaraxyo iyo dilal lagu laayay madax maamulkaasi ka tirsan. Ururka Xisbul Islaam ee maamula degmada Luuq ee gobalka Gedo oo sheegay in ay dhan ka yihiin Axmed Madoobe maamul cusubna ku dhawaaqay (Exclusive News »